Amidio Rivet mifandraika amin'ny herinaratra, Bimetal Rivet, Trimetal Rivet. rimett bimetal Ity fifandraisana ity dia manana fitarihana herinaratra tsara ary tsy azo ovaina oksiasiôna ny velarany. Ny fampidirana varahina 3 - 28% dia mety hanatsara ny fanoherana ny volafotsy.
Ny rivet matevina no fastener maharitra mahazatra ampiasaina amin'ny hoditra sy takelaka fiaramanidina. Alohan'ny fampiharana, dia zana-tsipika malefaka ihany no misy azy ireo miaraka amina loha boribory sy fisaka amin'ny lafiny iray. Manolotra ny Rivets Volafotsy Solid izahay izay mpitondra elektrika tsara.
Alefaso ara-potoana, antoka azo antoka, famolavolana lasitra mahaleo tena, valiny ara-potoana, fa tsy fanandramana mpanjifa, famakafakana ny firafitry ny priduct.
Ny fitaovana fifandraisan'ny herinaratra elektrika cadmium oksida dia be mpampiasa, ny teboka mampiempo ambany amin'ny fifandraisana amin'ny sublimation dia mety hahatonga ny faritra mangatsiaka hifandray, ary miaraka amin'izay koa ny famonoana vokany, hisorohana ny fandoroana ny fifandraisana.
Ny fifandraisana AgSnO2, AgSnO2In2O3 dia manana tombony amin'ny hamafin'ny hafanana, fanoherana avo amin'ny fangejana fusion ary fanoherana ny fandoroana sns.
Ny fitaovana no fitaovana fiarovana ny tontolo iainana tsara indrindra hanoloana ny AgCdO.
Izahay dia manamboatra tariby Silver Alloy misy kalitao amin'ny alloys samihafa toy ny AgCdo10, AgCdo12, AgNi10, AgNi12, AgSno2 10 sns.